Baby Panda's School Bus အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
၏ဖော်ပြချက် Baby Panda's School Bus - Let's Drive!
လူငယ်များအတွက်တစ် ဦး ကစူပါပျော်စရာကားမောင်းဂိမ်း! Baby Panda ၏ကျောင်းဘတ်စ်ကားသို့ဆက်သွယ်ပါ။
【အေးသောယာဉ်မောင်းပါ】 Cherry Blossom လမ်းနှင့် Rainbow တံတားပေါ်တွင်ဘတ်စ်ကားစီးပါ။ Beep Beep!
Class ဒါဟာအတန်းချိန်ပါပဲ you သင်သည်သူငယ်တန်းအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။ ကျောင်းသုံးပစ္စည်းများအတွက်စျေး ၀ ယ်ထွက်သွားပါ၊ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရန်နှင့်အခြားအရာများရယူပါ။
【ပျော်စရာကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်】ကစားစရာများ၊ လက်ဖက်ရည်ပွဲများနှင့်သူငယ်ချင်းများ! သင်ယူခြင်းသည်မည်သည့်အခါမျှပျော်စရာကောင်းသည်မဟုတ်ပါ။ 【ယာဉ်အသွားအလာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသိကောင်းစရာများ you’re သင်ကျောင်းဘတ်စ်ကားကိုမောင်းနေစဉ်ပထမ ဦး ဆုံး Saftey!
Amazing BabyBus ၏ဖော်ပြချက်:
1 ။ ကျောင်းဘတ်စ်ကားကိုမောင်းပြီးသင်၏သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုသိမ်းပါ။
2 ။ ထိုင်ခုံခါးပတ်ကိုဆွဲရန်သတိရပါ!
3 ။ ကျောင်းမှာသင်လိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးအတွက်ဈေးဝယ်ထွက်ကြပါစို့ သူငယ်တန်းအတွက်စောင်များ၊ ကျောင်းအိတ်များ၊ ခဲတံသေတ္တာများနှင့်အခြားအရာများ။
4 ။ ကျောင်း၏ဓာတ်ပုံစတူဒီယိုကိုစစ်ဆေးပါ။ ဝတ်စားဆင်ယင်ရန်လှပသောအဝတ်အစားတွေအများကြီး။ ရဲ့ဝတ်စုံပါတီပျော်မွေ့ကြပါစို့!
5 ။ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန်ကျောင်းဘတ်စ်ကားကိုဆေးရုံသို့မောင်းပါ။ အလေးချိန်၊ အလေးချိန်၊ ကြားနာမှု၊ နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်အခြားအရာများကိုတိုင်းပါ။
6 ။ စာသင်ခန်းထဲတွင်ကစားစရာများကစားခြင်း၊ ရေစာစားခြင်း၊ သူငယ်တန်းဘဝကိုပျော်မွေ့ခြင်း။
၁ ။ Virtual မောင်းနှင်မှုသည်ကလေးများအားကျောင်းဘတ်စ်ကားဖြင့်မောင်းနှင်ခြင်း၏ပျော်ရွှင်ဖွယ်အတွေ့အကြုံကိုရရှိစေသည်။ မူကြိုကလေးများအတွက်ပြင်ဆင်ထားသောပညာရေးဆိုင်ရာ application တစ်ခု။
3 ။ ဂိမ်းသည်ကလေးများအားပျော်ရွှင်စရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောနည်းဖြင့်ကျောင်းသွားရန်ပုံဖော်ပေးသည်။
4 ။ လေ့လာသင်ယူလေ့လာပါ။
BabyBus အကြောင်း ————— -
BabyBus တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကလေးများ၏တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်သိလိုစိတ်ကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ကလေးများ၏ရှုထောင့်မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်များကိုအပ်နှံသည်။ သူတို့ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာကိုစူးစမ်းလေ့လာနေသည်။
ယခု BabyBus သည်ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းမှ ၈-၈ အရွယ်ရှိပရိသတ်သန်း ၄၀၀ ကျော်အတွက်ထုတ်ကုန်များ၊ ဗီဒီယိုများနှင့်အခြားပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကမ်းလှမ်းသည်။ ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာစကား၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ သိပ္ပံ၊ အနုပညာနှင့်အခြားနယ်ပယ်အသီးသီးမှကလေးငယ်များ၏ပညာရေးဆိုင်ရာအက်ပလီကေးရှင်း ၂၀၀ ကျော်၊ ပျိုးခင်း ၂၅၀၀ ကျော်နှင့်ကာတွန်းအမျိုးမျိုးသောကာတွန်းရုပ်ပုံများထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
Baby Panda’s School Bus - Let's Drive! (HD 1080p)
BabyBus -Baby Panda's School Bus, Let's drive - game play for kids
New Gaming Fun
Nan Htwe Sin